Fanavaozam-baovao NewsFrames Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2019 7:52 GMT
Raha tsiahivina, hamorona fitaovana nomerika sy dingana famoahana ho an'ny fandalinana haingana ny endrika sy ny fironana media antserasera eo amin'ny tsenan'ny fampitam-baovao manerantany ity tetikasa ity, ary hitarika fikarohana amin'ny resadresaka, ny vaovao ary ny mediam-bahoaka manerantany. Kinendrintsika ny hamintina ireo tantara sy lohahevitra malaza, lehibe sy zara raha taterina isaky ny firenena ary ireo tantara mifototra amin'ny angon-drakitra sy olana mivaingana azo avy amin'ny fikarohana.
Namoaka tolotr'asa talen'ny tetikasa izahay; hatramin'ny 20 Jona 2016 ny fara-fametrahana ny fangatahana.
Mba hananganana izany fitaovana izany sy ny dingana famoahana, dia miara-miasa amin'ny Media Cloud izahay, fitaovana fikarohana angona misokatra izay manadihady ireo fanontaniana sarotra marobe momba ny media antserasera amin'ny alalan'ny fanarahamaso ireo loharanom-baovao amin'ny media sosialy sy haino aman-jery maherin'ny 260.000. Ny Media Cloud moa dia tetikasa iraisan'ny MIT Media Lab sy ny Berkman Center for Internet & Society ao Harvard.
Tamin'ny volana lasa teo, nanatontosa fivoriana fandinihana roa niaraka tamin'ny Sands Fish, iray amin'ireo mpikaroka miasa ao amin'ny Media Cloud ao amin'ny MIT Media Lab, miaraka amin'i Ethan Zuckerman izahay. Tamin'ny dingana voalohany nataonay dia nametra-kevitra mpiserasera idealy izahay, ary namorona karazam-pitaovana ho an'ny tontolon'ny asa ho an'ireo mpandray anjara ato amin'ny Global Voices mba hamoronana sy hitantanana ireo fangataham-pikarohana amin'ny angon-drakitra Media Cloud.